यूरोप का गतिबिधि – Page7– MeroJilla.com
एनआरएनको आप्रबाशी समस्या समाधानको संयोजकमा स्पेनका खरेल Friday, April 27th, 2018
स्पेन । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएन ) ले आप्रबाशी समस्या समाधान उपसमिति स्पेनका दीपक खरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको छ । पर्यटनदुत समेत रहेका खरेलको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । त्यस्तै समितिमा पोल्यान्डबाट आनन्द घिमिरे, पोर्चुगलबाट गोविन्द सापकोटा, चेक रिपब्लीकबाट डा. चिरन्जीवी खडका, डेनमार्कबाट दिपक सापकोटा, बेल्जियमबाट..
बार्सिलोनामा ‘सत्रुगते ‘ हाउसफुल , स्विटजरल्याण्डमा पनि देखाइने
स्विटजरल्याण्ड । बार्सिलोनामा नेपाली चलचित्र ' सत्रु गते ' हाउसफुल भएको छ । आयोजकलाई दर्शकको भिड सम्हाल्न धौधौ, यता दर्शकहरू सिट रोक्नलाई दौडधुप। झट्ट हेर्दा, नेपालकै सिनेमा घरमा फिल्म हेर्न आएजस्तै आभास धेरै दर्शकले गरे। चलचित्र हेर्न आएका दर्शकहरू हलको क्षमताभन्दा धेरै भएपछि कोही फर्किन बाध्य भए, त कोही भुईंमै बसेर पनि फिल्म हेर्न हौसिए’ आयोजक नेपालोना टिमका सदस्य सुरेश..
स्पेनमा बिदेशी संग नेपाली नयाँबर्ष मनाउदै Friday, April 6th, 2018
स्पेन l नेपालीहरु विश्वको जुनकुनै पनि कुनामा बसोबास गरेपनि देशको परिचय विश्वभरी फैलाउनु कुनै कसर बाँकी नराख्ने नेपाली परम्परा नै छ l स्पेनका नेपालीहरु यहि तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको पर्यटन र पर्यावरणको प्रबर्दन गर्ने र नयाँ बर्ष २०७५ सालको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने उदेश्यले नेपाली जनप्रगतिशील मंच स्पेनले बार्शिलोना नगरपालिका र सो संग सहकार्य गरिरहेको..
बार्सिलोना आउदै नेपाल आईडलका ३ हिरो Thursday, April 5th, 2018
स्पेन । नेपाली जनसम्पर्क समिति स्पेनको आयोजनामा बार्सिलोनामा नेपाली नयाँ बर्ष सांगीतिक साँझ २०७५ आयोजना हुने भएको छ । समितिले यहि अप्रिल १७ तारिख मंगलबारका दिन नेपाली नयां वर्षमा आयोजना गर्ने विशेष कार्यक्रममा नेपाल आइडलका मुख्य तीन कलाकार नेपाल आइडल बुद्ध लामा , दोश्रो निशान भट्टराई र तेश्रो प्रताप ..
कास्की समाज स्पेनले भित्तेपात्रो बिमोचन गर्दै Saturday, March 31st, 2018
स्पेन । कास्की समाज स्पेनले आउदै गरेको नयाँ साल २०७५ को शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गर्ने भएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ स्पेनको कार्यालयमा अप्रिल १६ तारिखका दिन गर्ने भएको हो । साँझ ४ बजे गरिने उक्त कार्यक्रममा समाजले २ बर्षे कार्यकालमा गरिने भनेको १५ बुंदे कार्ययोजनाको १ नम्बर बुंदामा राखिएको क्यालेन्डर बनाउने योजना पनि पुरा गरेको छ । स्पेनको बार्सिलोना सहरमा रहेका..
गौलीलाई साथीसग मनका कुरा समुहद्वारा आर्थिक सहयोग Friday, March 30th, 2018
बिगत लामो सहयोग मृगौला पिडीत नेपाल लमजुङ कुन्सा घर भई हाल बार्सिलोनामा बस्दै आएका राम मनी गौलीलाई साथीसग मनका कुरा समुहले आर्थिक सहयोग गरेको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण पछी पनि अस्वस्थ्य रहेका राम मनि गौली बार्सिलोना स्थित सोसियल घर छाड्नु परेकोले झनै समस्यामा परेका थिए । दुई महिना पश्चात सोसियल घर प्राप्त हुने भएकोले गौली लाई दुई महिनाको लागी खाने बस्ने ब्यबस्थाका लागी..
पेरिसको आइफल टावरमा बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी Saturday, March 24th, 2018
पेरिस । २५६२ औ बुद्ध जयन्ति संसारको सबै भन्दा सुन्दर शहर पेरिसमा धुम धामका साथ मनाउने तयारी भैरहेको छ। येही आउदो ०६ मे २०१८ आइतबारका दिन पेरिस Eiffel Tower को आगनी (Trocadero) मा मनाउने भनिएको छ। बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हुन भन्ने, बुद्धलाई संसार भर चिनाउने र उनका शान्ति सन्देश छर्नका निम्तीनै शायद संसारको सबै भन्दा बडी प्रयटक आउने ठाउँमा आयोजना गर्ने भनिएको हो।..
स्विटजरल्याण्ड । गीतसंगीत तथा ट्रेलरका कारण बहुप्रतिक्षित बनेको नेपाली चलचित्र ‘शत्रु गते’ युरोपका विभिन्न देशहरुमा प्रदर्शन हुने भएको छ । यही चैत्र ९ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्रलाई बार्सिलोनामा रहेको नेपालोना इभेन्ट्सले युरोपभरि प्रदर्शन गर्न लागेको हो । नेपालोना इभेन्ट्सका अनुसार चलचित्र आगामी अप्रिल १ देखी युरोपको बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क,..
बेल्जियममा सम्झियो युगपुरूष स्व. गिरिजा प्रसाद कोईरालाला Friday, March 23rd, 2018
बेल्जियम । नेपाली जनसम्पर्क समिती बेल्जियमले गत मंगलबारका दिन गणतान्त्रिक नेपालका कमान्डर नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष, क्रान्तिनायक,नेपाली कांग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति तथा पूर्व राष्ट्र प्रमुख , सहमति, सहकार्य र एकताको सुत्रधार , युगपुरूष स्वस् गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आठौं पुण्य स्मृति दिवश मनाएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समिती बेल्जियमकी सभापती श्री सीता सापकोटाको..
पर्बत समाज बेल्जियमबाट बिरामी किसान रिजालको उपचारमा सहयोग Thursday, March 22nd, 2018
बेल्जियम । पर्वत पैञ्यू गाऊँपालिका -४ हातेमालोचोक निवासी यूवा सामाजिक व्यक्तित्व किसान रीजाल विगत केही दिनदेखि मस्तिष्कमा गम्भीर समस्या भै न्युरो अस्पताल वासबारीमा काठमाडौंमा उपचाररत रहनु भएकोछ । अत्यन्तै महँगो उपचार विधिका कारण उहाँलाई आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धीत सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिएकोमा पर्बत समाज बेल्जियम को पहलमा खस गरि पर्बत घर भई बेल्जियम मा रहनु..